सरकार ! देशमा न्याय मरेकै हो ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सरकार ! देशमा न्याय मरेकै हो ?
२०७५ जेष्ठ २६, शनिबार १२:२४ गते
सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका अभियुक्तलाई सरकारले असल चालचलन भएको भन्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सगर्व जेलमुक्त ग¥यो । यस विषयमा अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त भइरहेका छन् । विधिको शासन र लोकतन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले छोराका हत्यारालाई कारबाहीको मागसहित न्यायको भीख माग्दै १४ वर्षअघिदेखि आन्दोलनरत गंगामाया अधिकारीको सत्याग्रहप्रति भने पूरै बेखबरजस्तै बनेको छ । अहिले ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने राम शाहको दिव्योपदेश धरापमा मात्रै परेको छैन, सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखानसमेत प्रमाणित भएको छ । छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाही नभएसम्म अन्तिम सास बाँकी रहेसम्म सत्याग्रह नतोड्ने अडान आमा गंगामायाले लिएकी छन् । उनले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनदेखि पुनः वीर अस्पतालमा अनशन सुरू गरेकी हुन् । उनको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । तर, उनले आफ्नो प्राणै गए पनि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नतोड्ने जिकिर गरेकी छन् । अहिले न्याय महँगो भएको भन्दै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
स्मरणीय के छ भने न्यायको भीख माग्दै गंगामायासँगै सत्याग्रहमा होमिएका उनका पति नन्दप्रसादको ०७१ असोज ६ गते वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो । मृतक नन्दप्रसादको शव अझै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ । गंगामायाका जेठा छोरा नूरप्रसाद पनि चार वर्षदेखि बेपत्ता छन् । कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारबाही नभएसम्म शवको दाहसंस्कार नगर्ने अडान लिए पनि सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्न सकेको छैन । निर्दोष कृष्णप्रसादको तत्कालीन नेकपा माओवादी कार्यकर्ताहरुले ०६१ जेठ २४ गते रत्ननगरमा हत्या गरेका थिए । हत्यारालाई कारबाहीको याचना गरे पनि सरकार गंगामायाको मृत्यु पर्खेर बसेको अनुभूति गरिएको छ । गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि मानवअधिकारवादी, प्रेसजगत् तथा विश्वजगत्ले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । गंगामायाको चीत्कारले नेपाललाई न्याय मरेको देशका रुपमा विश्वभर चित्रण भइरहेको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने सरकारले न्यायका निम्ति चौध वर्षसम्म सत्याग्रह गर्ने गंगामायाजस्ता निरीह व्यक्तिहरुको आवाज सुन्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
विधिशास्त्रले ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनेको छ । नेपालमा विधिको शासनको लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कानुनी राज्यको कल्पना गर्नु पनि मूर्खतासिवाय केही होइन । किनभने, यो देशमा राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति भने फेरिएको छैन । १७ वर्षीय कृष्णप्रसादको हत्यामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही गरी न्याय दिन मानवअधिकारकर्मी, पेसाकर्मी, रेडक्रसलगायत सामाजिक संघसंस्थाहरुले दबाब दिए पनि सरोकारवाला कसैको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले गंगामायाका लागि सान्त्वनाका दुई शब्दसमेत बोल्न आवश्यक नठान्नु अर्को दुर्भाग्य हो । जनताको पार्टीका नेता भन्न रूचाउनेहरुलाई संवेदनाले नछुनु विडम्बनाकै कुरा हो । स्मरणीय छ, तत्कालीन एमाओवादीका नेताहरुले हत्याको जिम्मेवारी लिँदै युद्धको भाषामा ‘सक्ने भए आफूहरुलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न’ सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । अहिले सरकार चुनौतीको भाषा बोल्नेहरुकै नियन्त्रणमा छ । बोलीमा समाजवाद र आचरणमा अधिनायकवादको नीति अख्तियार गरिरहेको कम्युनिस्ट सरकार गंगामायाको मृत्युको कामना गर्दै कलंकको टीका लगाउन आतुर छ । तर, गंगामायाको जीवनरक्षाप्रति गम्भीर छैन । देशमा न्याय मरिसकेको छैन र कान स्वस्थ छ भने सरकार ! गंगामायाजस्ता न्यायका लागि अन्तिम याचना गरिरहेका पीडितहरुको आर्तनाद सुन ।